Which planets have what effect in our life ? | Mero Jyotish
हाम्रो जीवनमा कुन ग्रहले के प्रभाव पार्छ ?
हामीलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ कि ग्रह तथा नक्षत्रहरूले हाम्रो जीवनलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पार्दछ। यहाँ हामी सूर्यादि ग्रहले आफ्नो-आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा सामान्य चर्चा गर्दैछौँ।
सूर्य ग्रह शासन गर्दछ र सूर्यलाई सिंह राशिबाट ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। यसले पुरुषत्व शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। तपाईंको जीवनमा बुबा, पति आदिको प्रभाव यो ग्रहबाट तय हुन्छ। सूर्यको प्रभावले तपाईंमा युवा उत्साह र गम्भीरता देखाउँदछ, जसको कुण्डलीमा सूर्य बलवान् छ त्यो व्यक्ति नेतृत्व गर्नमा कुशल र राजा समान जीवन व्यतित गर्ने हुन्छ।
चन्द्रमा ग्रह भावको स्वामी हो, यसले एक व्यक्तिको विचार र इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्दछ। चंद्र कर्कट राशिको स्वामी हो। चन्द्रमामा चिसो र चिसोपनको कारणले यो ग्रहलाइ ज्योतिषविद्यामा स्त्री ग्रह मानिन्छ, यसले आमा, प्रसव, शीतलता आदिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। चन्द्रमाको शुभ प्रभावमा रहेको व्यक्ति एकदम संवेदनशील र भावनात्मक हुन्छ।
यो ग्रह क्रोधी(रिसाहा) ग्रह हो, यसैले यसको रङ्ग रातो र रगत, आगो, ताप, तरवार (युद्धको देवता), भूमि, अवरोध, शक्ति आदि क्षेत्रमा मङ्गल ग्रहले प्रभावमा देखाउँदछ। मङ्गल ग्रहको प्रभावले व्यक्ति क्रोधित हुन्छ र यदि व्यक्तिको क्रोध सहि ठाउँमा भयो भने, त्यस्तो व्यक्तिले हरेक कुरा प्राप्त गर्न सक्दछ। यदि जन्म कुण्डलीमा मंगल स्थिर र बलवान् छ भने त्यस्तो व्यक्तिले बोल्नमा भन्दा काम गर्नमा जोड दिने र काममा जस्तोसुकै मेहेनत गर्न पनि पछि नपर्ने हुन्छ।
बुध ग्रह सबैभन्दा शक्तिशाली ग्रहहरु मध्ये एक हो र यसको सम्बन्ध तपाईंको मस्तिष्क सँग रहेको हुन्छ। यो ग्रहले तपाईंलाई तर्कशक्ति प्रदान गर्छ र तर्कसंगत सोच दिन्छ। यसको शुभ प्रभावमा व्यक्ति हरेक काम राम्रो सँग सोचविचार गरेर मात्र गर्छ। समग्रमा यस ग्रहको प्रभाव तपाईको विचारमा रहन्छ।
बृहस्पति ग्रह ज्ञान र बुद्धिको ग्रह हो र यसको सिधा सम्बन्ध तपाईंको ज्ञान र बुद्धिसँग रहन्छ, साथै यो ग्रह अध्यात्मसँग पनि सम्बन्धित रहेकाले यो ग्रहको शुभ प्रभाव रहेको व्यक्ति ज्ञानमा निपूर्ण, अध्यात्ममा रुचि राख्ने, आफूभन्दा ठूला व्यक्तिको आदर-सत्कार गर्ने र सल्लाह दिनमा कुशल हुन्छ।
शुक्र ग्रह सुन्दरताको पर्याय ग्रह हो र यसको सम्बन्ध आँखा, आँखाको प्रकाश, आय, विवाह, फूल, मोती, पत्नी, ब्राह्मण र चाँदी आदिसँग छ। यदि शुक्र ग्रह बलवान् छ भने यी उपयुक्त चीजहरूमा राम्रो परिणाम दिन सक्छ। यदि व्यक्तिको कुण्डलीमा शुक्र ग्रह त्यति बलियो छैन भने त्यसमा यौन आकर्षणको कमी, प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक जीवनमा असफलताको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। शुक्र ग्रहको प्रत्यक्ष प्रभाव शरीरको यौनाङ्गमा रहन्छ।
पौराणिक कथाका अनुसार शनि मृत्युका देवता यमका जेठो दाइ हुन् । शनिको प्रभावमा रहेको व्यक्तिले केहि प्राप्त गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ। शनि कामकाजी मानिसहरूका प्रतिनिधि हुन्। उसले तपाईको खराब कामलाई शिक्षक झैं सजाय दिन्छन् र राम्रो कामका लागि इनाम पनि दिन्छन्, त्यसैले शनि ग्रहलाई कर्मफलदाता भनिन्छ।
राहु छाया ग्रह हो। यसले महसुस गर्ने चीजहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ किनकि यो स्वयं एक छाया ग्रह हो र यसको कुनै भौतिक आकार छैन। राहू आत्मविश्वास र निडरताले भरिपूर्ण छ। यदि कुनै व्यक्तिको कुण्डलीमा राहु ग्रह बलवान् छ भने त्यो व्यक्ति कुशल राजनीतिज्ञ हुन सक्छ। एक कमजोर राहुले हडबडी, चिन्ता, मानसिक तनाव निम्त्याउन सक्छ।
राहु जस्तै केतु पनि एक छाया ग्रह हो र यस ग्रहले मानिसहरूलाई आध्यात्मिकता र आत्माको विश्लेषणतिर जाने प्रेरणा दिन्छ र सांसारिक बन्धनबाट छुटकारा दिन्छ। फोक्सो, आन्द्रा आदि जस्ता शरीरका अङ्गमा समस्याको कारण केतु ग्रहको कमजोर प्रभाव हुन सक्छ।